Lamadegaanka ayaa khatar ugu jira isbeddelka cimilada | Saadaasha Shabakadda
Qofna ma oran doono cidlada ayaa loo hanjabayaa, sax? Laakiin runtu waxay tahay inay yihiin meel aad u jilicsan inta aan qiyaasi karno. Dhirta, xayawaanka, iyo dadka lagu qiyaasay 500 milyan ee ku nool dhulalkan ayaa la qabsaday cimilada lamadegaanka.
Laakiin haddii heer kulku sii kordhayo, noloshooda waxay ku jiri doontaa khatar daran.
Sida lagu sheegay warbixinta UN ee deegaanka (UNEP), muddadii u dhaxeysay 1976 ilaa 2000, celceliska heerkulka saxaraha ayaa kor u kacay inta udhaxeysa 0 iyo laba darajo centigrade, oo ka duwan 0 darajo oo ay ku soo kordhay meeraha intiisa kale. Saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo waxay keenaysaa abaaro aad u daran oo daba dheeraada, sidaa darteed roobabkii horeyba u yaraa ayaa sii yaraanaya oo aan muuqan.
Saxaraha ugu badan ee ay saameysay waa Kalahari ee Afrika, iyo Atacama ee Chile. Labadaba waad arki kartaa sida noloshu isugu dayeyso inay noolaato. Laakiin iyagu ma aha kuwa keliya ee ay khusayso. Hoos u dhaca biyaha ayaa sababaya in webiyada ay qalalaan, sida Niilka ku jira Masar, ama Colorado ee Mareykanka. UNEP waxay ka digeysaa in haddii Qiiqa gaaska lagu sii daayo, Biyaha ayaa si aad ah u saameyn doona, taas oo khatar galinaysa caafimaadka dadka lamadegaanka deggan, iyo sidoo kale kan dalagyadooda iyo xayawaankooda.
Haddii aan sii wadno ka-faa'iideysiga biyaha dhulka hoostiisa ah, abuurista kaabayaal dhaqaale, ama goobo tababarro millatari ah, waxaan beddeli karnaa muuqaalka gebi ahaanba. In kasta oo ay wax waliba jiraan, Kaveh Zahedi, oo ah ku-xigeenka agaasimaha Xarunta Ilaalinta Adduunka (UNEP), ayaa sidaas leh lamadegaanku waxay noqon karaan warshadaha tamarta ee qarnigan, marka lagu daro u adeegida meelaha loo dalxiis tago, ama xitaa in la helo dawooyin cusub oo nolosha dadka hagaajin kara.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Lama degaanka ay ku hanjabtay cimilada sii kululaaneysa